Inqubomgomo Yobumfihlo - Kinne Maskinteknik AB
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza ukuthi siqoqa, sisebenzisa, sigcina, siveza futhi sivikela kanjani imininingwane yakho yangasese. Kusebenza kuwo wonke amawebhusayithi kaKinne Maskinteknik AB, izinkonzo kanye noxhumana nabo lapho kukhona ireferensi yale Nqubomgomo Yobumfihlo, noma ngabe ufinyelela noma uyisebenzisa kanjani.
Kule Nqubomgomo Yobumfihlo, sisebenzisa igama elithi “idatha yomuntu siqu” ukuchaza imininingwane engakhomba umuntu wemvelo ngokuqondile noma ngokungaqondile.
Ngokwamukela le Nqubomgomo Yobumfihlo uyavuma ukuthi siqoqe, sisebenzise, ​​sidalule futhi songe imininingwane yakho ngendlela echazwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Amawebhusayithi Eqembu Lesithathu: Amanye amakhasi kuwebhusayithi yaseKinne Maskinteknik AB aqukethe izixhumanisi zamawebhusayithi wesithathu. Lawa masayithi anenqubomgomo yawo yobumfihlo futhi iKinne Maskinteknik AB ayinasibopho sawo ekusebenzeni kwawo. Abasebenzisi abahambisa imininingwane noma ngalezi zingosi zenkampani yangaphandle kufanele bahlaziye izinqubomgomo zobumfihlo zamasayithi ngaphambi kokuba noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu luthunyelwe kubo.
Kinne Maskinteknik AB, Sweden, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sweden unesibopho sedatha yomuntu siqu. UKinne Maskinteknik AB unesibopho sokucubungula imininingwane yakho futhi ahlinzeke izinsizakalo okufanele zinikezwe ngokuya ngemigomo ebekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Ukuqoqwa kwemininingwane yomuntu siqu
Uma uthenga nathi noma uthintana nathi ngeposi, ngocingo, ngemibukiso yezohwebo noma ngokuvakasha ke uyavuma ukuthi wabelane ngemininingwane yakho bese uvuma ukuthi lolo lwazi luzodluliswa futhi lugcinwe kumaseva ethu eSweden.
Sigcina lezi zinhlobo ezilandelayo zolwazi, igama, ikheli, ikhodi leposi, ikheli leposi, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, inombolo yocingo,
Imininingwane osinikeza yona
Sigcina imininingwane enjalo oyinikeza kumawebhusayithi ethu noma osinikeza yona ngokuxhumana nathi oxhumana nathi ngeposi, ngocingo, ngemibukiso yezohwebo noma ngokuvakasha. Lokhu kufaka phakathi:
igama, ikheli, ikhodi yeposi, idolobha, izwe, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, inombolo yeselula.
imininingwane yokulethwa, imininingwane yokukhokhisa, imininingwane yokukhokha kanye neminye imininingwane oyinikezela ngokuthenga noma ukulethwa komkhiqizo futhi, uma izinsizakalo zokulethwa zinikezwa ngolunye lwezinhlelo zethu ezihlanganisiwe, olunye ulwazi olufanele lokulethwa (isimo sokulethwa) olugcinwe ngumlingani okhethiwe wokulethwa;
Imininingwane enikezwe maqondana nezingxoxo kwizithangami, ngocingo, izingxoxo, ukuxazululwa kwengxabano, imbalelwano ngokusebenzisa amawebhusayithi ethu noma izincwadi ezithunyelwe kithi.
Ukusetshenziswa kwemininingwane yomuntu siqu
Inhloso yolwazi ukuthi kufanele ukwazi ukuthenga futhi sikwazi ukukunikeza ngomsebenzi wamakhasimende.
Ngokwamukela le Nqubomgomo Yobumfihlo uqinisekisa ukuthi singasebenzisa imininingwane yakho ukuze:
vimbela, uthole futhi uphenye inkohliso, izehlakalo zokuphepha, izinto ezingavinjelwa noma imisebenzi engekho emthethweni.
xhumana nawe, kungaba nge-imeyili, incwadi noma ngocingo ukuxazulula izingxabano, noma ezinye izinhloso ezivunyelwe umthetho;
qhathanisa imininingwane ukuze uqinisekise ukunemba futhi uyiqinisekise nabantu besithathu;
ukukunikeza ezinye izinsizakalo ozicelayo futhi ezichazwe lapho siqoqa imininingwane; futhi
ngemvume yakho ngqo kuwe ngokuthumela impahla yokumaketha ngemikhiqizo kaKinne Maskinteknik AB.
phendula izicelo zakho, ukwenza isibonelo, ukuxhumana nawe mayelana nombuzo owuthumele kumakhasimende ethu;
Ukusetshenziswa kwemininingwane yomuntu ngenhloso yokuthengisa
Ngemvume yakho etholwe ngokuya ngemithetho esebenzayo nale Nqubomgomo Yobumfihlo, singasebenzisa imininingwane yakho ukuze;
ukukwazisa ngemikhiqizo yethu nezinsizakalo zethu;
thumela okuqondisiwe kokumaketha nokunikezwayo okuphakanyisiwe okususelwa kokuthandayo;
futhi wenze ngezifiso insizakalo yethu
Asithengisi noma siveze imininingwane yakho kubantu besithathu ngezinjongo zokuthengisa.
Qeda ukusebenzisa kwethu idatha yomuntu siqu ngezinjongo zokuthengisa
Uma ungafisi ukuthola okunikezwa ukumaketha nokukhangisa kithi, sazise nge sale@kinnemaskinteknik.com.
Ungafunda eyethu inqubomgomo Cookie ukuthola eminye imininingwane yokuthi asetshenziswa kanjani amakhasi ethu e-web.
Ukudalulwa kwemininingwane yomuntu siqu
Siveza imininingwane yomuntu siqu ukuze sifeze izibopho zomthetho. Imininingwane enjalo izodalulwa kuphela ngokuya ngemithetho nemigomo esebenzayo.
Singabelana ngolwazi lakho lomuntu siqu ne:
Ama-subcontractors asisiza ukuqhuba ibhizinisi (njengokuthi, kepha kungagcini lapho, insizakalo yamakhasimende, uphenyo ngenkohliso, ukuqoqwa kwe-invoice, ukuhanjiswa kwendlebe kanye nokusebenza kwewebhu).
Isiphathimandla, igunya lamaphoyisa, noma omunye umuntu ogunyaziwe, ukuphendula imibuzo mayelana nophenyo lobugebengu noma izinsolo zomsebenzi ezingekho emthethweni noma omunye umsebenzi ongaholela esikweletini noma kuwe. Uma kunjalo, ngezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, sizodalula imininingwane enjalo futhi efanelekile ophenyweni olufana negama, inombolo yokuphepha komphakathi, idolobha, izwe noma isifundazwe, ikheli leposi, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili, umlando igama lomsebenzisi, ikheli le-IP, isikhalazo sokukhwabanisa nomlando wokuthengisa.
Izinkampani ezibika ngesikweletu esingabika ngazo ulwazi ngokuthenga kwakho, ukungakhokhi, noma okunye ukwephulwa kwe-akhawunti yakho okungavela kumbiko wakho wesikweletu kuze kube semthethweni okuvunyelwe ngumthetho.
Ezinye izinkampani uma sifuna ukuhlanganisa noma ukutholwa yinkampani enjalo. Uma kwenzeka lokhu, sizodinga ukuthi inkampani entsha ihambisane nale Nqubomgomo Yobumfihlo mayelana nokuqhutshwa kwemininingwane yakho yangasese. Uma idatha yakho yangasese izosetshenziswa noma idalulwe nganoma iyiphi enye inhloso ngaphandle kwalokho okushiwo kule nqubomgomo, sizokwazisa ngakho futhi, uma kusebenza, sicela imvume yakho.
Ukudluliswa kwemininingwane yomuntu siqu
Sigcina futhi sicubungula imininingwane yakho kumaseva ethu eSweden.
Ukuphepha nokulondolozwa kwemininingwane yomuntu
Sisebenzisa izindlela zokuphepha ezingokomzimba, ezobuchwepheshe nezenhlangano, maqondana nenani nokuzwela kwedatha yomuntu siqu, ukuvimbela ukucubungula okungagunyaziwe, kufaka phakathi kepha kungakhawulwanga ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukutholwa kanye nokusetshenziswa, ukulahleka, ukususwa noma ukulimala kwemininingwane yomuntu siqu. Ezinye zezindlela zokuphepha esizisebenzisayo yizicishamlilo, ukuvikelwa kwegciwane, ukulawulwa kokufinyelela kanye nokuvikela ngokomzimba ngendlela yamaveni / ezokuphepha.
Ukususwa kwemininingwane nokugcinwa kwemininingwane yomuntu uqobo
Ngokwesicelo sakho nangokuhambisana nezinhlinzeko zalesi sigaba, sizosusa imininingwane yakho ngokushesha okukhulu. Ukususwa kwemininingwane kuzokwenziwa ngokuya ngomthetho osebenzayo.
Singagcina imininingwane yomuntu siqu ephathelene nabantu nezinkampani uma:
sinentshisekelo esemthethweni yebhizinisi futhi ayinqatshelwe ngumthetho, njengokubuyisa imali esetshenziswe ngokweqile, ukuphatha ukulungiswa kwengxabano noma
siphoqelekile ukuthi sigcine imininingwane yomuntu siqu ukuze sifeze izibopho zomthetho ezifana nokuhambisana nomthetho wendawo, ukukhwabanisa nokutshontshelwa imali, noma ukuthatha ezinye izinyathelo ezivunyelwe ngumthetho.
Ezimweni ezinjalo, idatha yomuntu siqu izophathwa ngokuvikelekile futhi inqobo nje uma kunesidingo.
Ngokuya ngemikhawulo ebekiwe umthetho wokuvikela idatha we-EEA, unamalungelo athile maqondana nedatha yakho yangasese. Unelungelo lokufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhawulwa, ukuphikiswa, ukususwa kanye nokutholakala kwedatha. Sicela usithinte uma ufisa ukusebenzisa noma yiliphi lalawa malungelo. Uma ufisa ukucela ukufinyelela kulo lonke ulwazi lomuntu siqu esibambe ngawe, sicela wazi ukuthi ukukhonjwa kwesithombe okugunyaziwe kuzodingeka ukufakazela ubuwena.
Ungakwazi Xhumana nathi online nganoma yisiphi isikhathi. Uma imibuzo ingaphendulwa ku-inthanethi, ungasibhalela: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sweden.
Uma ungagculisekile ngendlela esiphatha ngayo imibuzo yakho, unelungelo lokuhambisa isikhalazo ku-Idatha Yabahloli.